Dad Safar ah oo ay Ciidan Beeleedka Jwxo-shiil ay Laayeen – Rasaasa News
Sep 16, 2009 Jwxo-shiil
Wararka naga soo gaadhay Dagmadda Nus-Dariiqa ayaa sheegaya in Ciidan Beeleedka Jwxo-shiil ay ku dileen duleedka tuulada Nus-Dariiqa dadweyne safar ahaa oo saaraa gaadhi xamuul ah.
Dadka la laayey ayaa waxay la socdeen Gaadhi xamuul ah ah, ayaa la sheegayaa in ay wadada ugaleen ka dibna Rasaas ku fureen halkana ay ku dileen shan ruux oo ka mid ahaa rakaabkii gaadhiga iyo Darawalkii Gaadhiga oo lagu magacaabo Cabdi Raxmaan Axmed Shaahid, waxaa na soo gaadhay magacyada afar ka mid ah dadkii rakaabka ahaa oo ay magacyadoodu kala ahaayeen;
1. Cadbi Xuseen yuusuf
2. Bashiir Ibraahim Khaliif
3. Maxamuud Urur Cowle
4. Bashiir Nuur Cabdulaahi Xanaf
Dadka la laayey ayaan ilaa iyo hada la garanayn ujeedada ka dambaysa layntooda, balse mudooyinkan dambe ciidanka Jwxo-shiil ayaa waxay dhibaato xoog leh ku hayaan dadweynaha Somalida Ogadeeniya. Jwxo-shiil, oo ah garab ka mid garbyada uu u kala jabay ururka ONLF, ayaa bilaabay arimo ayna abid ku kicin ciidamada Wadaniga Xoreynta Ogadeeniy [CWXO], ciidanka Jwxo-shiil ayaa hawlgaladooda la beegsada beelaha la dariska.
Laba todobaad ka hor ayey ahayd kolkii ay gubeen gaadhi Ambalaas ah oo ay lahayd hayada OWDA, isla markaasna ay afduubteen Cabdiwaaxid oo ka mid ahaa hawlwadeenada caafimaad ee hayada, in kasta oo ay soo daayeen muddo ka dib.